कबिता मार्फत बिरेन्द्र मा.बि लाई सम्झिदै युवा कवि आयुष बुढाथोकी - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक १३, २०७५ समय: १४:३५:५०
इटहरी/ हरेक मानिसका आफ्नो आफ्नै प्रतिभाहरु हुन्छन । कसैले आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर प्रष्फुटन गर्छन त् कसैले आफु भित्रै सिमित राख्छन । पछिल्लो समय आफुमा भएको अन्तर्निहित प्रतिभालाई विभिन्न सामाजिक संजाल मार्फत धेरैले सार्बजनिक गरिरहेको छन् ।यस्तै नेपाली साहित्य लेखनमा पछिल्लो समय निकै सक्रिय नबोदित युवा कबि हुन् आयुष बुढाथोकी ।
पुर्बी नेपालको भोजपुर जिल्लास्थित सल्पासिलिछो १ मा पिता मदन बुढाथोकी र माता लक्ष्मी बुढाथोकीको कोखबाट जन्मिएका उनि साहित्य क्षेत्रमा निकै नै अब्बल देखिन्छन् । उनले २०७२ सालमा एउटा “रुमलिएको मन” गजल संग्रह समेत प्रकाशन गरिसकेका छन् । अहिले आएर उनी आफूले अध्यन गरेको बिधालयलाइ कबिता मार्फत यसरि सम्झन्छन् । जुन कविताले करिब ३ महिना पहिले जिल्ला स्तरीय कबिता प्रतियोगितामा पहिलो स्थान हासिल गरेको थियो ।
अझै प्रस्न गर्छ यो समाज,के गर्यो बिरेन्द्र मा.बि ले?
अझै भन्छ समाज के गर्यो बिरेन्द्र मा.बि ले??
के गरेन बिरेन्द्र मा.बि ले?
रमाउदै छ, नाम कमाउदै छ राख्दै छ सम्झनामा बिरेन्द्र मा.बि परिवार।
काठमाडौ/ प्रवासमा रहेर पनि साहित्यमा समर्पित काभ्रेली चेली देवकुमारी गौतमद्वारा लिखित उपन्यास प्रेमवर्षा’को आज राजधानीमा...
कबि राजबाबु श्रेष्ठ ‘सागर’को कबिता – ‘देश आफै बन्दछ’
जताततै ढुङ्गा मुढा बर्सिन थाले भत्किए पौवा पाटी अनि सडकमा लगाइएका बारहरु रोडमा ठिङ्ग उभिएका मुर्कुट्टा झैँ मक्किएका काठक...